April 19, 2018 April 19, 2018 Aagan Post0Comments
नराम्रो काम तथा नराम्रा घटनाहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्र तपाईँ आफ्नै कारणले कमजोर रहनेछ । बोल्दा वा कुनै पनि प्रस्तुतिमा भाग लिँदा प्रशस्त तयारी गर्नुहोला कमजोरी गरेको वा भएको आभास हुँनेछ । दिनलाई सही रूपमा सपदुपयोग गर्न सकिनेछैन । तयारी बिनानै प्रस्तुत गरिने कुनै पनि योजना विफल हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यावसायमा सामान हराउँने तथा नाँफा कमाउँन अरू दिन भन्दा बढी समय खर्चनु पर्नेछ ।
आम्दानी का स्रोत हरु बढी नै हुने छन् । नयाँ कामहरू गरेर आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँन सकिनेछ । विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउँने हुँदा राम्रा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । सामाजिक संजालको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । धन सम्पति जोड्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी भने जस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । विद्यामा राम्रो प्रगति हुँने हुँदा पढाई लेखाइमा मन जानेछ । सरकारी सम्पत्ति तथा पृत्रिक सम्पत्ति हात लागि हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । माया प्रेममा धोका हुँनेछ दाजुभाइ वा अग्रजहरूको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउँन सकिनेछ ।
← मुक्तिनाथ विकास बैंकको खुद नाफा ४२ करोड भन्दा बढी, प्रति शेयर आम्दानी कति ? जान्नुहोस
एन आइ सी एसिया बैंक को नाफामा भारी गिरावट, प्रति शेयर आम्दानी कति ? →
बि.स.२०७५ जेष्ठ ३० गते । बुधबार । आजको राशिफल यस प्रकारका छन् :-
June 13, 2018 Aagan Post 0